Abavelisi beemveliso kunye noMveliso-abavelisi beTshayina baseChina-Icandelo 2
I-XZ400 ethe tyaba yomkhombe wokugrumba isixhobo sokuphamba ine-reyimitha ephezulu ye-900mm, amandla amakhulu okutsala amandla e-400kN, itorque ye-14000N · m, kunye nobunzima bomatshini obungenanto be-11.5t.
XR220D yokujikeleza ukumba rig
I-XR220D yokujikeleza ukumba isixhobo sobunzima esinobukhulu obuphindaphindeneyo bokuphinda silingane nge-2000mm, ubuninzi bokubhola ubunzulu be-80m, eyona torque inkulu yokukhutshwa kwe-220kN · m, kunye ne-injini yamandla ye-242kW. Isebenzisa ukukhuhlana kunye noomatshini bokutshixa kwemibhobho yokugrumba.
I-XR360 yokujikeleza ukujikeleza kweerig, ubukhulu bokubhola bufikelela kuma-2500mm, ubunzulu bokubhola bunokufikelela kwi-102m, eyona torque iphezulu yi-360kN · m, kwaye amandla enjini angama-298kW. Kufanelekile ukuba uhlobo ukukhuhlana kunye umatshini yokutshixa uhlobo drill umbhobho.
I-XRS8 / 45 yokujikeleza kwe-rotary rig, ubuninzi be-reaming ubukhulu bunokufikelela kwi-4000mm, ubuninzi bokumba ubunzulu bunokufikelela kwi-110m, eyona torque iphezulu ikhupha i-758kN · m, kwaye amandla enjini angama-746KW.
I-XSL12 / 600 yokumba kakuhle
I-XSL12 / 600 yokugrumba amanzi kakuhle kukurhubuluza ngokupheleleyo ukuqhuba kwamanzi ngokuqhuba kakuhle. Ubunzulu bokubhola buninzi yi-1200m, ubukhulu bepali yokudlula yi-500mm, kwaye amandla aphezulu okuphakamisa inkqubo yesondlo yi-600kN. Ukusebenza kuhle kakhulu, uya kwazi emva kokusetyenziswa.
I-XZ1350 ethe tyaba yokugrumba isixhobo sokubhola ine-ream ephezulu ye-1300mm, amandla amakhulu okutsala-1795kN, i-torque ye-50500N · m, kunye nobunzima bomatshini obungenanto be-25t.
Isithuthi esincinci esincinci
Isithuthi esincinci se-all-terrain isithuthi sokuhamba esirhubuluzayo. Isetyenziselwa ikakhulu: umhlaba weefama, iiigadi, izindlu zokugcina izityalo, iindawo zokugcina izilwanyana, iilwandle, ikhephu kunye neziza zokwakha kunye neminye imimandla, ukuphathwa okungaphantsi komqolo, imithambeka yeentaba, iindlela zamatye, iindlela zodaka kunye namanye amacandelo amabi anokuhamba, encinci, ehambayo, eguqukayo, elula ukusebenza, umthamo omkhulu wokuthwala, ingxolo encinci kunye nezinye izibonelelo.
I-hdd rig, umatshini wokugrumba i-hdd, Horizontal Directional Ukubhola Rig, Umatshini wokugrumba amaqula,